FIPIKRI | ADVANTISTA Federasiona Madagasikara Afovoany
Pasitora : RATSIMBAZAFY Lalaniaina	FILOHAN'NY DEPARTEMANTA FIPIKRI : Federasiona Madagasikara Afovoany
15 Aprily 2020 Fampaherezana
TANJONA FIPIKRI : Mambra 45 000 eto amin’ny FMC Mahatoky avokoa!
FIANGONANA REHETRA ETO AMIN’NY FEDERASIONA DIA HEZAHINA HO LASA FIANGONANA …
TATITRA FANATITRA MAHATAKA-DAVITRA FMC 7 JOLAY 2018
Notanterahina manerana ny faritanin’ny federasiona ny fanatitra mahatakadavitra. Ny fanatitra …
Formation des formateurs GCV : Mahazoarivo, Tsarasaotra, Betafo, Manandona
Ny 18 -21 mai tao Antsirabe Formation des formateurs sur …
Mila ateraky ny fanahy isan’andro isika. Distrika Antanifotsy ny 25-27 mai 2018
Mila ateraky ny fanahy isan’andro isan’andro isika. Io ny lohaten’ny …
CALENDRIER: FIOFANANA hataon’ny Ekipa FIPIKRI eto ANTANANARIVO
DEPARTEMANTA FIPIKRI ANDEFASANA :Ny Komitin’ny fiangonana rehetra eto ANALAMANGA ANTONY: …
FILAZANA FEBROARY 2019 : DEPARTEMANTA FIPIKRI
NY Sabata folakandro dia ilay boky toro-làlana ho amin’ny fahaiza-mitantana nosoratan’I E.G. White no ho vakiantsika isam-piangonana :FIZARANA 1 : NY LALAN’NY LANITRA MOMBA NY FAHALALAHAN-TANANA SY NY TANJONY
Toko 1 è Mpiara-miasa amin’Andriamanitra – Toko 2 è Ilay mpanao soa feno fiantrana antsika – Toko 3 è Nahoana Andriamanitra no mampiasa ny olombelona ho irany? – Toko 4 è Ireo foto-kevitra mifanohitra eo amin’I KRISTY sy SATANA – Toko 5 è Fahalalan-tanana eo amin’izay itoeran’I KRISTY – Toko 6 è Mitory teny mivantana
Azo atao ny manao izany ho ady hevitra (débat) fa ny zava-dehibe dia ny handraisan’ny rehetra fanapahan-kevitra. Misaotra indrindra.
Mino izahay fa efa manana Filohan’ny FIPIKRI ny isam-piangonana rehetra. Raha sendra tsy manana ianareo dia aoka hivory ny Komitin’ny Fiangonana mba hanendry izany. Ho an’ireo gropy (zanam-piangonana) dia azo atao ny mametraka io anadraikitra io amin’ny Talem-piangonana na ny Mpitahiry vola. Indro misy tabilao modely hanaovanareo ny Tatitra rehefa avy nivory ianareo ka omena ny Pasitoran’ny Distrika ary hateriny aty alohan’ny 25 febroary 2019.
DISTRIKA FIANGONANA Anaran’ny Mpitahiry vola 2019 miaraka amin’ny N° Téléphone Anaran’ny Mpitahiry vola 2018 miaraka amin’ny N° Téléphone
PROGRAMA FIPIKRI 2019 : Toroana hevitra ianao hamaky ilay Boky “Toro-lalana ho amin’ny fahaiza-mitantanana” nosoratan’I
E.G.White . Manatona ny Mpampiely boky fantatrao n any PAsitoran’ny Distrika hahazoanao izany. Mahereza daholo ary misaotra e!
FILAZANA 12 JANOARY 2019 : DEPARTEMANTA FIPIKRI
ANDEFASANA : Ny FIANGONANA sy ny mambra rehetra eto amin’ny F.M.C.
ANTONY : FIJOROANA VAVOLOMBELONA RAKETINA AN-TSARY sy AN-TSORATRA
Toy izao ny andinindinin’izany ampahafantarina antsika rehetra
Ny DIVIZIONA misy antsika no maniry nyhanao izany firaketana an-tsary sy an-tsoratra izany ka mahakasika ny FAHATOKIANA eo amin’ny FITANTANAM-PIAINANA KRISTIANA ilay izy.
Isika eto ANTANANARIVO sy ny manodidina izay manana fijoroana vavolombelona miavaka sy manokana àry dia asaina am-pitiavana ho tonga aty amin’ny Birao FMC ho raisim-peo ny ALAROBIA 30 janoary 2019 manomboka amin’ny 9.00 ora tsy diso.
Isika any ivelan’Antananarivo kosa dia atolotra an-tanana ny Pasitoran’ny Distrika ny fijoroana vavolombelona hataonao mahakasika izany voasoratra anaty taratasy ary mazava tsara ny soratra. Asiana ny anaranao feno sy ny Fiangonana misy anao izany. Manolotra sary iray koa ianao na Pasteur mihitsy no maka sary anao dia alefany aty aminay izany alohan’ny faran’ny volana JANOARY 2019 izao.
Samia mifampilaza sy mifanaitra amin’izao hetsika izao ny isam-piangonana. Ity ny nomerao raha mila fanazavana fanampiny :è Pasteur Lalaniaina RATSIMBAZAFY Tél 03407 817 77 na Chef Moïse Tél : 03337 109 28. Misaotra indrindra.
TSINDRIO ETO : HANGALANAO NY FOMBA FANANGANANA Budget Eglise.pdf
« ARCHIVES » BOKY SY FITAOVANA HERINANDRO FIARAHA-MIVAVAKA FIPIKRI DESAMBRA 2018
Zoma 7 Desambra pptx
Sabata 8 Desambra
Sabata 1 Desambra pptx
Alarobia 5 desambra pptx
2018 MAHITA INDRAY NY MAHA-IZY ANTSIKA MARINA 2018
MAHITA INDRAY NY MAHA-IZY ANTSIKA MARINA HERINANDRO-2
FILAZANA 22 SEPTAMBRA 2018 : DEPARTEMANTA FIPIKRI
ANDEFASANA : Ny Fiangonana rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina.
ANTONY : FIANGONANA TARATRA (Eglise Pilote) eto ANTANANARIVO
Araka ny fiofanana voalohany izay efa natao ny volana JOLAY sy AOGOSITRA lasa teo dia manana Tetikasa lehibe isika eto ANTANANARIVO hahatonga ny fiangonana izay misy anao ho FIANGONANA TARATRA (Eglise Pilote). Tsy ho ela dia hatao ny fiofanana faharoa. Alefanay amin’ny filazana manaraka ny daty sy toerana hanaovantsika izany koa aoka samy hiomana.
Fa Ireto misy fanamarihana sy daty tsara ho tadiditsika mahakasika ny fotoana manaraka
Ny taratasy rehetra dia mandalo sy soniavin’ny Pasitoran’ny Distrika avokoa.
TATITRA ISAM-BOLANA : Isaky ny faha-10 ny volana dia mandefa tatitra any amin’ireo mpandrindra ny fiangonana ary atao dika mitovy alefa aty amin’ny Departemanta ianareo ka toy izao ny daty :
TATITRA DATY HANDEFASANA ATY AMIN’NY FMC
VOALOHANY Alatsinainy 10 septambra 2018
FAHAROA Alarobia 10 oktobra 2018
FAHATELO Sabata 10 novambra 2018
FAHAEFATRA Alatsinainy 10 desambra 2018
ALAHADY 11 oktobra 2018 : Fivorian’ny mpandrindra miaraka amin’ny Pasitora isaky ny Distrika (Azonareo ovaina anefa araka izay daty mety aminareo)
Ny fivorian’ny mpandrindra miaraka amin’ny Fédération amin’ny volana NOVAMBRA dia alefanay ny daty marina aoriana.
Fijerena ny zava-bita antenantenany : Ny tatitra rehetra dia ampandalovina eo amin’ny Komity faran’ny Taona ataon’ny FMC ary hanaovana tatitra any amin’ny UNION misy antsika
31 Aogositra 2019 : FAHATAPERAN’NY TETIKASA
OKTOBRA 2019 : FIHAONANA FARANY hataon’ireo mpandrindra.
FILAZANA 11 AOGOSITRA 2018 : DEPARTEMANTA FIPIKRI
ANDEFASANA : Ny Pasitora sy ny mambra rehetra eto amin’ny F.M.C.
ANTONY : FANGATAHANA FIARAHA-MIASA AMINTSIKA MAMBRA
Ny Departemanta FIPIKRI eto amin’ny FMC dia hamokatra TAHIRY momba ny asan’ny mambra eto amin’ny Federasiona mba hahafahana miara-miasa. Natao indrindra izany mba hahafahatsika mambra mifampitsimbina sy mifanampy amin’ireo traikefa sy talenta ananatsika ka mety hahasoa ireo rahalahintsika. Natao koa izany mba hahafantarana ireo talenta sy fahaiza-manao ny mambra mba tsy hitadiavana izany any ivelany. Ohatra : Manao hetsika FOARA ny Distrika iray dia tena mora ny manohana izany foara izany amin’ny fampirantiana sy fivarotana ny entam-barotra vokarin’ny mambra iray rehefa fantatra ny momba azy sy ny vokatra vokariny ary ny toerana misy azy. Ilazana fotsiny izy amin’ny alàlan’ny tahiriny mipetraka aty amin’ny Departemanta. Toraka izany koa raha misy tinady sezam-piangonana ohatra dia mora ny miantso ny mambra iray manana traikefa amin’izany ary manana tahiry momba azy aty amin’ny Departemanta FIPIKRI raha mahaliana azy io tinady io. Koa entanina isika mambra rehetra izay liana amin’izany mba handalo any amin’ny Pasitoran’ny DISTRIKANAREO hanao photocopie ny taratasy ho fenoina mahakasika io tahiry io. Aoka mba hatao haingana izany satria tsy mitsahatra mitombo ny tinady ankehitriny mba hahafahana manolotra izany ho anao. Marihina fa ny asa rehetra mihitsy no voakasika amin’izao antso izao fa tsy ny asa Tanana ihany na fambolena fotsiny. Mankasitraka indrindra